प्रदेश ५ को राजधानी र नामाकरणको विषय राजनीतिक : चौधरी
बुधवार, पुष २, २०७६ लुम्बिनी टाइम्स
बुटवल । प्रदेश नं ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय राजनीतिक भएको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ ले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भएको जानकारी दिए । मन्त्री चौधरीले भने “राजधानी बुटवल हुने वा दाङ भन्ने प्रमुख कुरा हो तर बुटवललाई आधार मानेर राजधानी घोषणा हुन सक्छ ।”
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारले सर्वसम्मत निर्णय गर्न खोजको बताउँदै उनले सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतकै आधारमा हुने पनि बताए। ‘तीन नं. प्रदेशले पहिले निर्णय गर्यो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’ उनले भने–‘३ नं. प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौडा पनि एउटा छेउमा छ, उसले हेटौडा नै तोक्यो भने त्यसैलाई नजिर बनाएर हामीलाई पनि बुटवल तोक्न सजिलो हुन्छ ।’
मन्त्री चौधरीले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सकेसम्म सहमतीमै तोक्ने बताउँदै सहमति हुनै सकेन भने बहुमतका आधारमा नै हुने बताए । राजधानी तोक्ने र प्रदेशको नामाकरण गर्ने सांसदको बिशेषाधिकार भएकाले पार्टीको ह्वीप पनि नलाग्ने उनकाे भनाइ छ ।
प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने विषय राजनीतिक बिषय भएकाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी कमिटि बैठकमा समेत पार्टीले एउटा धारणा बनाओस् भनेको उल्लेख गरे।
प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि कुनै न कुनै दलमा भएकाले राजनीतिक सहमति जुट्यो भने राजधानी तोक्न र नामाकरण गर्न सजिलो हुने उनको भनाई थियो । ‘सर्वसम्मत होस भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो, त्यो भएन भने भोटिङमा जान्छ ।’ उनले भने ।
चुनावका बेला दाङ् तथा आसपासका नेताहरुले दाङ् राजधानी बनाउँछु र बुटवलका तथा आसपासका नेताहरुले बुटवल राजधानी बनाउँछु भनेर भोट मागेका कारण राजधानी तोक्ने काम जटिल बनेको उनकाे भनाई छ ।
पार्टीले एक प्रकारको धारणा बनायो भने नेताहरुलाई आफ्ना मतदातालाई भन्न पनि सजिलो हुने भएकाले पार्टीले पनि धारणा बनाउनु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेशसभाका सदस्य सहसराम यादवले विशेष समितिले प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषयमा सिफारिस गरेको र अन्तिम टुङ्गो प्रदेशसभाले लगाउने बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, पुष २, २०७६, ०१:३६:३६